တရုတ်နှင့် ဖိလစ်ပိုင် ပိုင်နက် အငြင်းပွားမှု စစ်ဖြင့် ဖြေရှင်းတော့မည်လား ~ Myanmar Express
တရုတ်နှင့် ဖိလစ်ပိုင် ပိုင်နက် အငြင်းပွားမှု စစ်ဖြင့် ဖြေရှင်းတော့မည်လား
တောင်တရုတ် ပင်လယ် အတွင်း၌ တရုတ်နှင့် ဖိလစ်ပိုင် ရေတပ်သင်္ဘော များ ထိပ်တိုက် ရင်ဆိုင်မှုပြုပြီး ရန် စောင်နေကြသည်မှာ တစ်လပြည့် သွားပြီ ဖြစ်သည်။
မကြာမီကပင် တောင်တရုတ် ပင်လယ်ပြင်၌ အငြင်းပွား ထိပ်တိုက် ရင်ဆိုင်မှုများသည် ယခုအခါ အခြေအနေ ပို၍ ဆိုးရွားလာနေပြီး တရုတ် နိုင်ငံ အနေဖြင့် ဖြစ်ပေါ် လာမည့် ကိစ္စရပ်များအား ရင်ဆိုင် ဖြေရှင်းသွားရန် အတွက် လိုအပ်သည်များကို အသင့် ပြင်ဆင်ထားပြီး ဖြစ်ကြောင်း မေလ ၁ဝ ရက်က ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသို့ သတိ ပေးကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
တရုတ်နှင့် ဖိလစ်ပိုင်တို့သည် တောင်တရုတ် ပင်လယ်တွင် တည်ရှိ ပြီး ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှ မိုင် ၂ဝဝ ခန့် ကွာဝေးသော စကာဘရော့ (The Scarboroush Shoal) ကျွန်းစု ပိုင်ဆိုင်ခြင်း အတွက် အငြင်းပွားနေကြ ရခြင်းဖြစ်သည်။ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကမူ အဆိုပါ ကျွန်းစုသည် ၄င်းတို့နိုင်ငံ၏ မိုင် ၂ဝဝ စီးပွားရေးဇုန်နယ် သတ်မှတ်ချက် ထားသော ရေပြင် အတွင်း တည်ရှိနေကြောင်း ပြောကြားထားသည်။
တရုတ်တို့ကလည်း တရုတ် အမည် ဟောင်ယန်းကျွန်းစုမှာ ၄င်း တို့ ပိုင်ဆိုင်ကြောင်း တောင်းဆိုထားကြခြင်း ဖြစ်သည်။တရုတ် Dragon ရုပ်မြင်သံကြား အသံလွှင့် ဌာနမှ သတင်းထောက် ဇောင်းဖန်းသည် တောင်တရုတ် ပင်လယ်ရှိ ဟောင် ယန်းကျွန်းပေါ်တွင် တရုတ်အလံ စိုက်ထူနေပုံကို ရုပ်မြင်သံကြားက ထုတ်လွှင့် ပြသခဲ့သည်။ သတင်း ထောက်ဖြစ်သူက တရုတ်နှင့် ဖိလစ်ပိုင်တို့ သူပိုင် ကိုယ်ပိုင် နှစ်ကြာရှည်စွာ အငြင်းပွားနေသည့် သမိုင်းဖြစ်ရပ်များကို ရှင်းလင်းပြခဲ့သည်။ အငြင်း ပွားနေသည့် ကျွန်းစုမှာ စကာဘရော့ ကျွန်းဖြစ်သည်။ ဖိလစ်ပိုင် တို့က ထို ကျွန်းကို ‘ပါနာဇဘက်ကျွန်း’ ဟု ခေါ် ကြသော်လည်း တရုတ် အခေါ်က ဟောင်ယန်းကျွန်း ဖြစ်သည်။
တောင်တရုတ် ပင်လယ် အတွင်း နယ်မြေဆိုင်ရာ ပြိုင်ဆိုင်မှုသည် ရေနံ ကြွယ်ဝသောဒေသဟု သတ်မှတ် ခံထားရသည့် ထိုဒေသ အတွင်း တရုတ်တို့ အင်အား လာပြခြင်းကို လျော့ကျ သွားစေရန် ဖိလစ်ပိုင်တို့ ကြိုးစားရင်း ထိုကျွန်းစုများအား မိမိတို့ ပိုင်ဆိုင်ကြောင်း တောင်းဆိုမှု အရှိန် ပိုမိုမြင့်မားလာခဲ့ရသည်။
တရုတ်နှင့် ဖိလစ်ပိုင်တို့၏ တင်းမာမှုမှာ ၂ဝ၁၂ ဧပြီ ၈ ရက်နေ့ က စတင်ခဲ့သည်။ တရုတ်ငါးဖမ်း သင်္ဘောများ ငါးဖမ်းခြင်းကို ဖိလစ်ပိုင် ရေတပ်မှ တားမြစ်ခြင်းက ကမ်း လွန် ပင်လယ်ပြင်တွင် တရုတ်ပြည်သူ့ လွတ်မြောက်ရေး တပ်နှင့် ဖိလစ်ပိုင် ရေတပ်တို့ ထိပ်တိုက်တိုးခဲ့ကြရတော့ သည်။ Myanmar Express Posted in: သတင်း
How my country people? you should know about important things. Daw Su Kyi is stupid. She did not aware "National Interest". Nowadays, look up the world! everyone try to build up their army ready for war. We don't have any idea, how can she make army fail. I hope people will understand about myanmar. Time will tell true.
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှရှိ မြန်မာ ဒုက္ခသည်စခန်းများ အမိုးအကာအခက်အခဲ ကြုံနေရ၊ မွတ်ဆလင်ဒုက္ခသည်များကို ကူညီနေသည့် ရွေဝါရောင် တော်လှန်ရေး ဘုန်းကြီးများ ဗုဒ္ဓဘာသာများကို ပစ်မထားသင့်
From : ..irrawaddy
မြန်မာနိုင်ငံ နယ်စပ်အနီး ဘင်္ဂလာဒေ့ရှ် နိုင်ငံတွင်းမှ ဒုက္ခသည် စခန်းများတွင် ပြီးခဲ့သည့် မဟာဆင် မုန်တိုင်းကာလမှ စပြီး ယနေ့အထိ မိုးဆက်တိုက်...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အနေနဲ့ လွတ် လွတ်လပ်လပ် နိုင်ငံရေး လုပ်နေ တာ သတ်တမ်း ၃ နှစ် ပြည့်တော့မှာ ဖြစ် ပေမယ့် သိသာထင်ရှားတဲ့ လုပ် ဆောင်နိုင်မှု တစ်ခုမှ မရှိသေးတာ...